မိမိကိုယ်ကိုအနာပျောက်စေသောဖန်သားပြင်ပါသောစမတ်ဖုန်းများကို ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်ရောက်ရှိမည် Androidsis
Riverside မှကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်မှသိပ္ပံပညာရှင်အုပ်စုတစ်စုကိုဖန်တီးခဲ့သည် အနည်းငယ်ရိုးရှင်းသောခြစ်သို့မဟုတ်ဖြတ်တောက်မှုထက်ကျော်လွန်ပြုပြင်နိုင်ပါတယ်သစ်တစ်ခုပစ္စည်းအစီရင်ခံအဖြစ် ပေါ်တယ် Business Insider ။ အဆိုပါပစ္စည်းသည်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပို့ဆောင်နိုင်ပြီး ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင်စမတ်ဖုန်းများတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
သုတေသီများပစ္စည်းဖန်တီးခဲ့သည် တစ် ဦး ionic ဆားနှင့် elastic ပိုလီမာကနေ ၎င်းတို့၏မူလအရွယ်အစားကိုအကြိမ် ၅၀ အထိချဲ့နိုင်သည်။ သူတို့၏အသစ်တဖန်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေသည့်အဓိကဖြစ်စဉ်မှာမော်လီကျူးအင်အားတစ်ခုဟုခေါ်သည်။ ion-Dipole အပြန်အလှန်.
ယခုအချိန်အထိဤပစ္စည်းအသစ်ဖြင့်စမ်းသပ်မှုများစွာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဖြတ်ခြင်းနှင့်ခြစ်ခြင်းများကိုအလွယ်တကူပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်ကြောင်းသိပ္ပံပညာရှင်များကဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ပစ္စည်းခြစ်ထားပြီးကတည်းကထက်နည်း 24 နာရီအတွင်းမော်လီကျူးတွေကတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဆွဲဆောင်ပြီးပြန်လည်ပေါင်းစည်းခဲ့ကြတယ်။ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု၏နိမိတ်လက္ခဏာကိုဖျက်သိမ်းရေး.
ဒီပစ္စည်းကိုစမတ်ဖုန်းတွေမှာတစ်နေ့မှာအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်၊ သင့်မိုဘိုင်းဖုန်းကိုပြုပြင်ရေးဆိုင်ထဲကိုခေါ်သွားမှာကိုသင်စိတ်ပူစရာမလိုဘဲမော်လီကျူးတွေကိုယ်တိုင်ပြန်လည်ထုတ်လုပ်သည့်အချိန်အထိနာရီအနည်းငယ်ကြာအောင်ငြိမ်နေသင့်သည်။ သုတေသီများအဆိုအရ၎င်းသည်လျှပ်ကူးပစ္စည်းဖြစ်သောကြောင့် စမတ်ဖုန်းနှင့်ဘက်ထရီနှစ်မျိုးလုံးတွင်ပြwithoutနာမရှိဘဲအသုံးပြုနိုင်သည်.
ကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်မှသိပ္ပံပညာရှင်များတီထွင်ခဲ့သောမိမိကိုယ်ကိုအနာပျောက်စေသောပစ္စည်း (လက်ဝဲ - ဖြတ်၊ ညာ - ပြန်လည်ပြုပြင်ထားသော)
စမတ်ဖုန်းများအတွက်မိမိကိုယ်ကိုအနာပျောက်စေသောပစ္စည်းများယခင်ကအချို့မော်ဒယ်များကိုစမ်းသပ်ပြီးဖြစ်သည်။ ဥပမာ၊ LG က G Flex ကို ထို့အပြင်တစ် ဦး ရှိခဲ့ပါတယ် သေးငယ်တဲ့ခြစ်၏အမှု၌သူ့ဟာသူပြုပြင်နိုင်စွမ်းပစ္စည်း, ဒါပေမယ့်ဒီသာ၎င်း၏နောက်ဘက် panel ကိုကန့်သတ်သည်။
လက်ရှိတွင်စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူများသည်သူတို့၏ပစ္စည်းများကို crystals များတပ်ဆင်ထားသည် Corning Gorilla Glass သို့မဟုတ်နီလာအဖုံးများ သင့်ဖန်သားပြင်များကိုကြာရှည်ခံစေရန်။ Motorola က နှင့်အတူ၎င်း၏မိုဘိုင်းတပ်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် Multilayer ဖန်သားပြင် ၄ င်းတို့သည်တုန်လှုပ်ခြင်း (သို့) ကျဆင်းခြင်းများကိုအမှန်တကယ်ခံနိုင်ရည်ရှိသော်လည်းမိမိကိုယ်ကိုအနာပျောက်စေသောဖန်သားပြင်များအသုံးပြုခြင်းသည်စားသုံးသူများအတွက်စိတ်ကိုပိုမိုငြိမ်သက်စေလိမ့်မည်။
သိပ္ပံပညာရှင်များကထိုပစ္စည်းသစ်သည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင်စမတ်ဖုန်းများသို့မဟုတ်တက်ဘလက်များတွင်အသုံးပြုနိုင်ပြီးသုတေသနနှင့်ပိုမိုတိုးတက်ရန်လိုအပ်သည်ဟုဆိုသော်လည်းစမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူများအနေဖြင့်ဤကဲ့သို့သောမိမိဘာသာပြန်လည်ပြုပြင်သည့်ဖန်သားပြင်သည်ဖြေရှင်းနိုင်မလားစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။ ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » Self-healing screen များနှင့်စမတ်ဖုန်းများကို ၂၀၂၀ တွင်ရောက်ရှိမည်
Samsung Galaxy Note 8: ကင်မရာနှစ်လုံးနှင့်လက်ဗွေစကင်နာပါဝင်သည့်သဘောတရား